IPhone 6 motherboards-ka waxay leeyihiin qol NFC chip | Wararka IPhone
Motherboard-yada IPhone 6 waxay lahaan karaan meel u gaar ah isku xirnaanta NFC
Alex Ruiz | | Qalabka IPhone, Tartanka
Waa mid ka mid ah astaamaha loogu baahan yahay aaladaha Apple muddo dheer, isku xirka wireless-ka NFC (Isgaadhsiinta Goobta dhow) illaa Bluetooth. Tiknoolajiyaddani waxay ku jirtaa taleefannada casriga ah ee badan ee Android waxayna u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay awoodaan xiriiriyahaaga ku xir qalab kasta oo kuu dhow ama agab kale, ha noqdo ku hadalka ku hadalka wireless, kan aqbala qalabka warbaahinta badan ama taleefan xog si aad lacag u bixiso. Iyada oo taabasho fudud Wada xiriirka u dhexeeya labada aaladood ayaa la sameeyaa iyada oo aan loo baahnayn in la dhex maro taleefannada. Waa horudhac iyo ku habbooneyn in shirkadda Cupertino ayaa dhinac uga baxay, laakiin waxay umuuqataa waxaa lagu soo bandhigi doonaa iPhone 6 ee soo socdaMaaddaama falanqaynta Motherboard-yada la daadiyay ay muujinayaan inay jirto kala duwanaansho ku habboon in lagu rakibo qalabka ku jira tiknoolajiyada NFC.
Laakiin sidee lagu gaadhay gabagabadaas? Isbarbardhiga Motherboard-yada xaday oo ah 6-inji iPhone 4,7 iyo 6-inji iPhone 5,5 ah oo iPhone 5S ay hadda ku jiraan, waxaa jira a farqiga ugu fiican ee qashinkaan (sanduuqyada cas ee sawirka kore). Cabbirka isku xirayaasha ee sabuuraddu waxay u dhigantaa baaxadda jajabyada NFC PN65, 32-pin, 5mm x 5mm cabir, sida midka ku dhejisan boosteejooyinka tartanka. Sawirka hoose waxaad ku arki kartaa cabirka daloolka loo maleynayo NFC chip-ka Motherboard-ka, sanduuqa guduudan, marka la barbardhigo daloolka si loo rakibo qalabka isku xirka xogta, ee cagaarka ah.
Waqtigan xaadirka ah wax kale maahan mala awaal ku saabsan Motherboard fuulay oo aan la ogeyn hadii ay runti oran doonto midka ku rakiban iPhone 6, waxa runta ah Apple ayaa ka dambeysa tartanka Marka ay timaado isku xirka aaladaha iyadoo loo adeegsanayo Bluetooth, tikniyoolajiyadda NFC waa mid aad u dhakhso badan, faa iido badan leh waxayna ka hortageysaa in la maro nidaamka iOS si loo habeeyo qalab cusub oo loo yaqaan 'Bluetooth'. Waa inaan sugno inta Apple ay soo bandhigayso aaladda oo naga yaabineyso astaamaheeda 9-ka Sebtembar halka ugu muhiimsan ee horeyba loo diyaarin doono.
Miyaad u maleyneysaa inay tani noqon karto xaqiijinta in iPhone 6 uu isku darayo tikniyoolajiyadda NFC?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Motherboard-yada IPhone 6 waxay lahaan karaan meel u gaar ah isku xirnaanta NFC
Sannadkii hore markii Apple la soo bandhigayay waxay ku qosleen astaamaha NFC HAHAHA
Ku jawaab juan perez
Waxaan ku tijaabinay Bioshock iOS, ma mudan tahay in lagu bixiyo 14 euro?
Bioshock ayaa hadda laga heli karaa App Store si loo soo dejiyo